I-eBay isungula ubukrelekrele bokufaka kwisicelo sayo | IPhone iindaba
Ngexesha elithile elidlulileyo besele sithethile malunga nokuba kunokwenzeka I-eBay iqala ukusebenzisa inkqubo yeArtificial Intelligence Ukuze kuphuculwe amava abasebenzisi bayo, ngakumbi xa bekhangela umxholo ngeqonga, kungenza njani ukuba kungenjalo.
Inkampani sele iqalile ukwandisa lo msebenzi mtsha ngokusebenzisa usetyenziso lwe-iOS, inkqubo yokwamkelwa komfanekiso eya kwenza uphando oluzimeleyo kwaye ngokungathandabuzekiyo iya kusigcina ixesha elininzi ... isebenza njani?
Le yindlela ababefuna ukuyicacisa ngayo kubasebenzisi bayo abaninzi:
Sifuna ukudibanisa inkqubela phambili yakutshanje kubukrelekrele bokusebenza, ukufunda kunye nombono wekhompyuter. Ezi zinto zintsha ziya kwenza ukuba kube lula kuwe ukukhangela eyona nto uyifunayo. Xa ufaka umfanekiso kule nto intsha ibizwa ngokuba yi "fumana kwi-eBay" sisebenzisa imodeli yokufunda enzulu eqhubekeka kwifayile kwaye siyisebenzise ukuyithelekisa nemifanekiso yeemveliso ze-eBay. Oku kuyaku-odola iimveliso ngokusekwe kubungakanani bokufana noko ukufunayo
Inyani yile yokuba iAmazon sele iwenzile amanyathelo ayo okuqala ngolu hlobo lwenkqubo yokukhangela, nangona kungenaziphumo zintle. Izibophelelo ezihlala zimanyene uGoogle kunye ne-eBay zinokuba nento yokwenza nayo. Kule ndawo ibaluleke kakhulu yokukhangela, ngubani olunge ngakumbi kuyo. Ngeli xesha i-eBay iyakwandisa ukusebenza ngendlela enezigaba, ukuba awukabinayo i-update kwaye ulinde ithuba lakho, siya kuqhubeka ukunika ingxelo ngokusebenza kwale nkqubo intsha.
Nokuba kunganjani na, ngakumbi nangakumbi izicelo zongeza ukusebenza kolu hlobo ekuhambeni kwexesha okanye ekugqibeleni kuya kuba yinto eqhelekileyo, iteknoloji kwinkonzo yomntu, ngaphandle kwamathandabuzo ... Ungawusebenzisa lo msebenzi kwezinye iinkqubo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-eBay iveza ubukrelekrele bokufakelwa kwisicelo sayo
Amawakawaka okugcinwa kwe-iPhone X athetha ukuba ukuthunyelwa ngoku kwiiveki ezi-5-6